Khumbula indlela namaqhinga Soviet yesikole, zokuhlobisa banal iyunifomu brown lace yasekuqaleni ezinjengenyanga. Manje ngalento kwi engavamile zikhunjulwe futhi - manje ezinjengenyanga ayanikezelwa ezining zokugqoka. Ake sihlole, yiziphi izinhlobo imigexo yasekuqaleni futhi lokho kungenziwa igqoke ukwakha indlela obunobunye.
Imisebenzi surface zasemahhovisi
Nge collar kungaletha ukunambitheka okunhlobonhlobo izingubo, kodwa kukhona injongo emibili eyinhloko kule-accessory ye:
esikhundleni umgexo ezibizayo futhi imigexo;
ukudala inkohliso layering izingubo.
Umsebenzi womfekethisi rhinestones futhi sequins kuhlobisa ingubo collar kusihlwa ungcono amagugu, futhi kulula ukuma-up collar kuyoba okubonakalayo esikhundleni ihembe, ezigugile ngaphansi Cardigan.
Izindlela ezinjengenyanga esikhiphekayo
Thanda "kulungisiwe" ezinjengenyanga zamanga abafowabo ihlukaniswe ngokuyinhloko kwifomu.
1 turndown. Lezi sekeli abe wayibhinca emuva, usebenzisa okuyinto kulula ukulungisa ubukhulu. Babukeka cute futhi ezilula, kodwa ngesikhathi esifanayo ahlinzeke eziningi amathuba ezihlukahlukene lokubhalela.
2. Ukuma. Lwenza shirt inkohliso, buttoned iningi phambi inkinobho noma inkinobho. Usayizi nesisekeli enjalo kuyakhethwa ngokuhambisana girth entanyeni.
3. nesiphuku. Lezi ezinjengenyanga asikhumbuza imigexo, njengoba beye benza ububanzi alinganayo ubude bayo. Basuke ngokuvamile asetshenziselwa njengoba imihlobiso kusihlwa, okwenza no- rhinestones futhi ubuhlalu.
Ezinjengenyanga kungenzeka ngobuningi ehlotshisiwe (ngaphesheya endaweni indwangu), ingxenye ehlotshisiwe (i onqenqemeni noma ekhoneni) noma kungekho umhlobiso (plain noma eprintiwe). Phakathi Decor ongakhetha atholakala:
noboya noma isikhumba ifaka.
Ungakwazi ukwaba ezinjengenyanga phezulu nge ajikelezayo noma abukhali, zendwangu futhi izinguqulo wathungela, kanye izesekeli kwenziwa ngokuphelele lobuhlalu.
Indlela ukugqoka ezinjengenyanga esikhiphekayo?
Uma uhlanganisa le-accessory nge izingubo, okuyinto seluvele collar, qiniseka ukuthi esikhiphekayo part ezidlulanayo ngokuphelele "awusakwazi ukulungiseka."
nenzuzo kakhulu ukubheka collar, kuhlangene monochromatic izingubo cut elula ngaphandle imininingwane ngokweqile zokuhlobisa.
Ezinjengenyanga Site ingubo kungakhathaliseki ukuma entanyeni: neckline eziqongweni, blouses nge ukuncishiselwa isiyingi noma esingunxantathu ngisho amasokisi amade.
Lapho ekhetha collar, unake ukuma ebusweni. amantombazane Chubby Kunconywa izesekeli ne emakhoneni ebukhali, nezintokazi ezibuka nge ebusweni eside - collar-yokubeka laphetha collar onobuhle ezinjengenyanga oplech'ya.
6 izizathu ukuthenga collar invoyisi:
1. Lungisa collar inala decor - esikhundleni esiphelele ubucwebe kanye ubucwebe obubizayo.
2. Yenza kobukhulu pullover kwansuku ukusiza monophonic ukuma-up collar - manje ijezi ngokuphepha kungenziwa igqoke ehhovisi.
3. Cardigans Abaningi kusikisela ukuthi ukuba ugqoke into eyodwa ngaphezulu - ihembe, ihembe, phezulu. Nokho, isibonelo kangcono esinamathelayo ukugqoka ngqo phezulu elondolo. Lapha wokutakula bill collar, ukudala inkohliso yezingubo ezigqokwayo ngaphansi.
4. Thenga ezimbalwa ezahlukene collar onobuhle ishibhile kuka isethi egcwele izingubo. Manje ungakwazi ukushintsha indlela nsuku zonke, kulondolozwa ibhajethi.
5. collar Amanga - yindlela enhle ukunikeza ukuphila yesibili izinto wachayeka. ingubo endala noma ijezi uyobheka entsha ngokuphelele.
6. Musa banethuba ukuya ekhaya futhi ushintsho, uma uya ngemuva umsebenzi iphathi noma ukugujwa. Ukubeka ku collar isikhwama umthethosivivinywa, baguqula ngubo ngemizuzwana.
Ngaphezu kwalokho, kufanele kuphawulwe ukuthi nesisekeli ezinjalo - inkomba yokuthi umuzwa wakho isitayela kanye nesifiso sokuzivumelanisa ukulandela imfashini. Vorotnichokk invoyisi kuzobonisa nganoma iyiphi indlela, okwenza ngubo esiyingqayizivele.
Sezimpahla zokubhukuda esobala - imfashini mkhuba 2013
A tattoo okuyimfihlakalo "ikati": ukubaluleka
Isikhwama sesikhumba sebesifazane: amathiphu, incazelo, izitayela zemfashini
Katya Silchenko - isitayela isithonjana kanye umklami young
Ihhotela "Oasis", Adler: incazelo, imisebenzi, ukubuyekeza
Okuhlola sulfuric - izindlela eziphumelelayo control inkathazo
Uyini isici inhlabathi kumiswa? Yiziphi izici inhlabathi kumiswa?
Zohlobo izikhukhukazi kakhulu amaqanda-laying: yini igama?
Futhi amaphupho, kodwa yebo, kuyiqiniso, uma lokhu ekusweleni kakhulu (k. "Izilwane" iqembu)
Ukuhamba walker ngoba ekhubazekile: abadala kanye nezingane
Compote okumnandi lamagilebhisi ebusika ngaphandle inzalo. Compote lamagilebhisi ebusika: iresiphi elula